बलिउड अभिनेत्रीको खान्की | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नयाँ सडक पुरानै व्यवहार
वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाका निम्ति सेफ हाउस →
बलिउड अभिनेत्रीको खान्की
करिना कपुरका डायटिसियन रुजुता द्विवेकरले स्वस्थ शरीरसम्बन्धी किताब लेखेका छन् – ‘डन्ट लुज योर माइन्ड, लुज योर वेट’। बलिउड अभिनेत्री करिनाले किताबको भूमिकामा आफ्नो छरितो शरीरको रहस्य खोल्दै भनेकी छन्, ‘रुजुताले डायट र डायटिङ’bout मेरो धारणै फेरिदिए। उनले नै मलाई सिकाए, कम खाएरमात्र जिउ छरितो हुँदैन। नियमित खानुपर्छ, सही तरिकाले खानुपर्छ।’
करिनाले ‘टसन’ फिल्मको समयदेखि द्विवेकरसँग परामर्श पछ्याउन थालेकी हुन्। जसको नतिजा सबैसामु छ। त्यो फिल्मबाट उनको जिरो-साइज फिगरले बलिउडभित्र र बाहिर खुबै चर्चा पाएको थियो। त्यही बेलादेखि करिना आफ्नो खान्कीमा विशेष ध्यान दिन्छिन्। किताबको भूमिकामा उनी लेख्छिन्, ‘टसन रिलिज भएपछि धेरैले मलाई सोधे, मेरो जिरो-साइज फिगरको रहस्य डायट हो कि एक्सरसाइज? खासमा यो दुवैको मिश्रण हो। छुट्टयाएर भन्ने हो भने यसमा मेरो खान्कीको ७० प्रतिशत हात छ, एक्सरसाइज र योगको ३० प्रतिशत।’
सुटिङमा जानुपर्ने र जानुनपर्ने बेला करिनाको छुट्टाछुट्टै डायट तालिका हुन्छ। मुम्बईमा छिन् भने उनी बिहानको नास्तामा म्युस्ली र दुध वा पराठा खान्छिन्। चिया र कफीबाट सकभर टाढै रहन्छिन्। खानैपरे दुध नहालेको। सुटिङमा छिन् भने ताजा फलफूलबाट उनको दिन सुरु हुन्छ। दिउँसो तिब्बती खानेकुरा खान रुचाउँछिन्, थुक्पा वा ममः। उनको बेलुकीको खाना सोया दुध वा स्यान्डविज हो।
‘म प्रत्येक दुई घन्टा बिराएर केही न केही खाएकै हुन्छु,’ करिना भन्छिन्।
‘जिस्म’ फिल्मबाट बलिउडमा उदाएकी बिपासा बासु आफ्नो अभिनयका लागि भन्दा छरितो र स्वस्थ शरीरका लागि चिनिन्छिन्। के हो त उनको स्वस्थ शरीरको रहस्य?
‘म जिउ स्लिम बनाउन डायटिङमा विश्वास गर्दिनँ,’ उनले भनेकी छन्, ‘म जे पनि खान्छु, तर हरेकदिन जिममा कडा मिहिनेत गर्छु।’
सुगर फ्री गोल्डकी ब्रान्ड एम्बेसडर बिपासा भन्छिन्, ‘छरितो ज्यानका लागि खान्की र एक्सरसाइज दुवैको उत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ।’ चिल्लो खानेकुराबाट टाढा रहन सुझाव दिने बिपासा अत्यधिक पानी पिउनुपर्ने र ताजा फलफूल तथा तरकारी बढी खानुपर्ने बताउँछिन्। उनी क्यालोरीको डरले पार्टीहरूबाट टाढा भाग्दिनन्। पार्टीमा खुब रमाउँछिन्। मज्जाले खान्छिन्, पिउँछिन्। तर, भोलिपल्ट क्यालोरी नष्ट गर्न जिममा खुब पसिना बगाउँछिन्।
यी बलिउड अभिनेत्री आफूले खाने खानेकुराको क्यालोरीमा खुबै ध्यान पुर्‍याउँछिन्। दिनको झन्डै २ हजार क्यालोरी पुग्छ भन्ने उनलाई लाग्छ। भन्छिन्, ‘त्यो पनि धेरै हो। मलाई त्यति चाहिँदैन।’
उनी बिहीबारबाहेक साताको सबै दिन साकाहारी खानेकुरा खान्छिन्। बिहानको नास्तामा एक प्लेट हलुवा र एक कप चिया। साताको तीनदेखि चारचोटि कडा एक्सरसाइज गर्न उनी कहिल्यै बिराउँदिनन्। जिमबाट फर्केपछि प्रोटिन सेक लिन्छिन्। उनी बिहानको खान अपराह्न साढे दुई बजेतिर मात्र खान्छिन्। जसमा एउटा रोटी वा पाउरोटी र दाल हुन्छ। सबैलाई अचम्म लाग्ला, स्लिम फिगरकी धनी शिल्पालाई रोटीमा घिउ नहाली हुन्न।
कहिलेकाहीँ गुलियो खान मन लागे कुल्फी वा चकलेट खान्छिन्। अपराह्नतिर एक कप हरियो चिया पनि पिउँछिन्। तातो पानी भने दिनभरिजसो खाइरहन्छिन्। बेलुकी सुत्नेबेला उनी पनि सोया दुध पिउने गर्छिन्।
‘खानेकुरामा म खासै परहेज राख्दिनँ, खालि एकैचोटि धेरै खाँदिनँ,’ उनी भन्छिन्, ‘जिम र योग भनेको मेरो बानी नै हो।’
पछिल्लो समय बलिउडकी सबभन्दा चर्चित अभिनेत्री प्रियंका आफूलाई जिमको सोखिन ठान्दिनन्। ‘फिल्ममा खेल्न जिउ छरितो राख्नुपर्छ, त्यही भएर सामान्य एक्सरसाइज गर्छु, त्यति कडा विधि अपनाउँदिन,’ उनी भन्छिन्, ‘म आफूलाई स्वस्थ राख्न चाहन्छु, जिरो, एक वा दुई साइजको होडबाजीमा मलाई कुनै रुचि छैन।’
सेलेब्रिटीहरूको जीवनशैलीलाई केटाकेटी र युवा पुस्ताले पछ्याउने हुँदा जिरो-साइज फिगरलाई त्यति प्रबर्द्धन गर्न नहुने उनको धारणा छ। ‘राम्रो प्रशिक्षकसँग परामर्श नलिई जिरो-साइज फिगरको निम्ति कडा एक्सरसाइज गर्नु उचित होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले तत्काललाई स्लिम भइए पनि अन्ततः स्वास्थ्यमा हानी पुर्‍याउँछ।’
उनी आफू पनि सामान्यतया आधा घन्टाभन्दा बढी एक्सरसाइज गर्दिनन्। जिममा मेसिनहरूसँग जुधेर पसिना निकाल्नुभन्दा प्राकृतिक योग गर्नु ठिक हुने उनको सुझाव छ। ‘यसले मन पनि चंगा राख्छ, शरीर पनि,’ उनी भन्छिन्।
‘स्वास्थ्यको ख्याल सबैले राख्नुपर्छ,’ मोडलिङबाट बलिउड छिरेकी दिपिका भन्छिन्, ‘त्यसैले हरेकका लागि कसरत जरुरी छ।’ पहिलो फिल्ममै सुपरस्टार शाहररुख खानको नायिका बन्ने सौभाग्य पाएकी दिपिका हरेक बिहान कार्डियो र लाइट वेट उचाल्छिन्। कामको सिलसिलामा घरबाहिर छँदा भने होटलकै जिमखानामा भए पनि एकघन्टा कसरत गर्नैपर्छ। साँझ उनी योग गर्न मनपराउँछिन् यसका लागि उनी घर नजिकको योग स्कुलमा भर्ना भएकी छन्। ‘जीउ स्फुर्त राख्नमात्र होइन, तौल घटाउन पनि कसरत र उचित खान्की जरुरी छ,’ दिपिका भन्छिन्।
दिपिकालाई बिहान उठ्नेबित्तिकै नास्ता नखाई हुन्न। उनी नास्ता टन्न खन रुचाउँछिन्। मासुको परिकार पनि चल्छ। दिउँसो दाल, भात र सलाद खान मन पराउने दिपिका साँझ भने भात र मासु पटक्कै खाँदिनन्। ‘बेलुकी यस्तो खाना खाँदा मोटाइन्छ,’ उनी भन्छिन्।
Posted By : Narayan Nepal Source Nagariknews
This entry was posted in जीबनशैली, फोटो फिचर. Bookmark the permalink.